Program & Avtivities
धनुषा जिल्ला मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लाहरु मध्ये कम वन क्षेत्र भएको जिल्ला हो । सरकारले सम्पूर्ण वन क्षेत्रलाई दिगो वन ब्यस्थापनका लागि वनलाई बिभिन्न किसिमको बर्गमा बर्गीकरण गरी उपयुक्त वन ब्यस्थापन पद्दति अपनाउदै आईरहेको छ । यो उत्तरमा चुरे पहाड देखि दक्षिणमा भारतको सिमाना सम्म फैलिएर रहेको छ । यसको उत्तर–दक्षिण औसत लम्बाई ४५.२७ कि.मि., पर्व–पश्चिम औसत चौडाई २७.४७ कि.मि. मा फैलिएर रहेको यस जिल्लाको स्वरुप झण्डै चरा आकारको रहेको देखिन्छ । यो जिल्ला नदीनाला र वनजंगल जस्ता प्राकृतिक श्रोत साधनमा पनि धनी नै मानिन्छ । यस जिल्लाको वन क्षेत्र अधिकांश उत्तर तर्फको चुरे र भावरमा पर्ने भएकोले सो क्षेत्रको भौगोलिक संरचनाको सम्बेदनशिलतालाई मध्येनजर राखी उक्त वनलाई संरक्षणमुखी व्यवस्थापनको आधारमा ब्यवस्थापन गर्दे आई रहेको छ । यी वनका अधिंकाश भागहरुहरु सरकारद्वारा व्यवस्थित राष्ट्रिय वनको रुपमा रहेको छ भने अन्य वनहरु सामुदायिक वन, कबुलीयती वन, सार्वजानिक तथा निजी वनको रुपमा ब्यवस्थापन गर्दै आई रहेको छन । यस जिल्लाको भौगोलिक संरचना आधारमा भावर चुरे क्षेत्रमा वन रहेको छ भने दक्षिण तराई क्षेत्रमा अधिक बसोबास क्षेत्र रहेको छ । अधिक जनसंख्या र कम वन क्षेत्र भएकोले स्थानीय जनताको वन पैदावारको मागलाई थेग्न सक्ने अवस्था छैन । यस प्रकारको बढदो वन पैदावारको मागलाई आपुर्ति गर्न निजी तथा सार्वजानिक जग्गामा ब्यापक बृक्षारोपण गरी वन विकास गर्नु पर्ने विकल्प बाहेक अन्य नभएको देखिन्छ ।
यस जिल्लाको मध्ये भागमा रहेको एक मात्र धनुषाधाम वनलाई संरक्षित वन घोषणा गरी ब्यवस्थापन भई रहेको छ । यसको कार्ययोजना अनुसार संरक्षणमुखी अवधारण अनुसार संरक्षण, सम्बद्र्धन र बुद्धिमतापुर्वक उपयोग गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस जिल्ला घना बस्ती तथा बढी जनसंख्या भएका कारण वन क्षेत्रमा अधिक चाप परि रहेको छ । वन पैदावारको मांग अत्याधिक रहेकोले अवैध वन कटानी, फडानी गरी वन पैदावार बिक्री गरिरहेका छन । यसका साथै खुल्ला चरिचरण, वन डढेलो आदीका कारण वनको मौज्दात परिमाण घट्दै गएको र वन पैदावारको गुणस्तरमा समेत ह््रास आएको देखिन्छ । प्राकृति वन व्यवस्थापनका धेरै जसो कार्यक्रमहरु चुरे क्षेत्र, भावरमा केन्द्रित छ भने निजी र सार्वजानिक वन विकास र विस्तार कार्य तराईमा गरिदै आएको छ ।
यस जिल्लामा राजनैतिक विभाजनको हिसावले ७१ गा.वि.स. हरु, ५ नगरपालिका र १ उपमहानगरपालिका रहेका छन । साथै १७ वटा ईलाका क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ भने कुल ७ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ ।
यस जिल्लाको प्राकृतिक सिमाना पूर्वमा कमला नदी, दक्षिणमा भारत संगको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, पश्चिममा रातु नदी र उत्तरमा चुरे पहाडको दक्षिणी पानी ढलो पर्दछ । छिमेकी जिल्लाहरुमा पूर्वमा सिरहा, पश्चिममा महोत्तरी र उत्तरमा सिंन्धुली जिल्ला पर्दछ भन्ने दक्षिणमा भारत पर्दछ ।
यस जिल्लाका वासिन्दाहरुको मुख्य पेशा कृषि रहेको छ । यहां करीव ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनताहरु कृषिलाई नै आफ्नो जिविकोपार्जनको मुख्य पेशाको रुपमा अंगालेको पाईन्छ । यसका अलावा नोकरीलाई दोस्रो पेशाको रुपमा लिईएको पाईन्छ । नोकरी गर्नेहरु मध्ये सरकारी सेवामा, शिक्षक पेशामा र हाल आएर बैदेशिक रोजगारमा रहेको पाइएको छ । यस जिल्ला अन्तरगत वन पैदावारमा आधारित उधोगहरुमा रोगजारीमा संलग्न भई पेशा अंगालेको संख्या पनि उल्लेखनीय रुपमा रहेको छ । कृषि मजदुरको रुपमा भारतका विभिन्न प्रान्तमा गई काम गर्नेहरुको जनसंख्या पनि ठुलै रुपमा रहेको देखिन्छ । हाल कृषि पेशाहरुबाट आफ्ना चाहना परिपुर्ति गर्न कठिनाइ हुदै गएपछि ति पेशा प्रतिको आकर्षण क्रमशः घट्दै गई बैदेशिक रोजगारी, नया उद्योग, व्यवसाय र व्यापार तिरको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ ।
क्षेत्रफल र उचाई
यस जिल्लाको जम्मा क्षेत्रफल १,१८३ वर्ग कि.मी. रहेको छ । यो जिल्ला २६ डिग्री ३५ु देखि २७ डिग्री ०५ु अक्षांश र ८५ डिग्री ५२ु देखि ८६ डिग्री २०ु देशान्तरमा फैलिएको छ (जिल्ला नक्शा) । यो जिल्लाको भौगोलिक बनोट तिन भागमा विभाजन भएर रहेको छ । यसको दक्षिणी भागमा समतल तराई पर्दछ, भने उत्तरमा भावर जसको उचाई ५००–८०० फिटसम्म फैलिएको छ र चुरे पहाड २००० फिट सम्मको उचाईमा रहेको छ । चुरे पहाडको कमजोर भु–वनोटका कारण वर्षेनी भू–स्खलन भैरहेको छ भने तराईमा नदी कटान र उकास भई उर्वरा कृषि भुमि मरुभुमिकरण भई रहेको अवस्था छ । चुरे क्षेत्रमा १५ देखि २५ डिग्री सम्म भिरालोपन रहेको छ, भने भावरमा १० डिग्री देखि १५ डिग्री सम्म रहेको छ । त्यसैगरी तराई क्षेत्रमा ३ देखि १० डिग्री सम्म भिरालोपन रहेको पाईन्छ ।
Rajendra Kumar Lal Karna
Economy & Progress
@ Copyright District Forest Office, Dhanusha. All Right reserved